Naa, onye obula n'ụwa a bụ maara SMS, a makwaara dị ka Text Ozi. Ọ bụ otu n'ime ndị kacha na kasị ochie ụzọ nke na-ezipụ obere ozi n'elu wireless netwọk. Ka ọ bụla ọzọ kọmputa ngwaọrụ, mobile igwe nwekwara ewekarị-apụghị izere ezere bara ma ọ bụ na e nwere ike na-ebilite ụfọdụ achọghị ọnọdụ nke ikpe a factory nrụpụta idemfo. Na ikpe, ihe niile dị ka ozi ederede, kọntaktị, ihe oyiyi na-na-echekwa on na ekwentị nwere ike-efu. Ya mere, ọ bụ nnọọ dị oké mkpa ịnọgide na-a nkwado ndabere na mpaghara nke ọ bụla ihe dị mkpa na ekwentị, e nwere. Ọzọkwa, n'adịghị ka ndị ọzọ media faịlụ, SMS a pụghị ịzọpụta na mpụga SD kaadị. Ya mere, ọ bụrụ na ị Flash na ebe nchekwa ekwentị ma ọ bụ igosi a factory nrụpụta, niile ozi ga-efu.
Samsung, na South Korean ụlọ ọrụ, bụ ndị kasị ibu Android smartphone onye gburugburu ụwa. Na a na nkuzi, m na-egosi gị 3 ụzọ ndabere Samsung SMS na kọmputa, ígwé ojii na ekwentị.
Part 1. Olee nkwado ndabere na mpaghara Ozi na Samsung na Save dị ka ihe XML / TXT File Part 2. ndabere Samsung SMS maka Free site Iji Samsung Kies Part 3. akpaghị aka ndabere Samsung Ozi Samsung Akaụntụ Part 4. Top 5 Android égwu Ime Samsung Ozi ndabere
Part 1. Olee nkwado ndabere na mpaghara Ozi na Samsung na Save dị ka XML / TXT File
Samsung Kies Akwadoo elu ma na-azọpụta ozi dị ka a message.sme faịlụ, nke bụ unreadable na ike na-eji iji weghachi. Otú ọ dị, i nwere ike na-amasị na-agụ SMS ugbu a na mgbe ichetara onwe nke pasted ihe ndị dị mkpa. Iji mee ka ya, i nwere ike ịgbalị SMS ndabere software maka Samsung - Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na-enyere gị aka ndabere niile ma ọ bụ họrọ ozi gị Samsung ekwentị mfe na conveniently. The Mac version na-arụ ọrụ fọrọ nke nta ahụ dị ka Windows version na-eme. N'ihi ya, na ndị na-esonụ nkuzi, m dị nnọọ na-Windows version dị ka a na-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Pịa download bọtịnụ ibudata na wụnye software na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Run ya ma jiri eriri USB jikọọ gị Samsung ekwentị na kọmputa na-eme ka n'aka na ọ nwere ike achọpụtara ọma.
Nzọụkwụ 3. Na isi window, pịa "ndabere gị ekwentị".
Nzọụkwụ 4. Lelee faịlụ na ụdị na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara gị Samsung na kọmputa, dị ka "Text ozi". Wee pịa "Malite Copy" na Samsung ozi-amalite na-kwadoo.
Cheta na: Ị nwere ike ịtọ nkwado ndabere na mpaghara ebe site onwe gị ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ndabara otu. Pịa Cheta na akara ngosi na n'elu nri akuku nke window ma họrọ "Mwube". Mgbe ahọrọ ọnọdụ na pịa "OK".
Part 2. ndabere Samsung SMS maka Free site Iji Samsung Kies
Samsung Kies bụ ihe magburu onwe ngwa mepụtara jikọọ Samsung ntị na mbadamba na kọmputa na-agba ọsọ Microsoft Windows ma ọ bụ Macintosh arụ ọrụ usoro. E nwere ihe abụọ nsụgharị nke Samsung Kies dị - Kies zuru version na Kies Obere version. The Obere version nwere ike na-eji imelite sistemụ nke ụfọdụ Samsung mobile ngwaọrụ. Samsung Kies nwere ike iji na nkwado ndabere na mpaghara data, transfer data, zuo ngwaọrụ atụmatụ ma ọ bụ nweta nkwalite nke ngwaọrụ femụwe na OS version. Lee, anyị ga-egosi gị otú ndabere SMS na Samsung ngwaọrụ mkpanaaka site na iji Kies zuru version nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Kies. Jide n'aka na-ibudata ziri ezi version nke Kies na gị Samsung ngwaọrụ mkpanaaka na PC sistemụ arụmọrụ na-akwado. Ọzọ ọmụma banyere download, wụnye, imelite Samsung Kies >>
Nzọụkwụ 2: Jikọọ Samsung ngwaọrụ mkpanaaka na kọmputa site na iji eriri USB. Ị pụrụ ịhụ otu ihuenyo dị ka n'okpuru Mgbe ejikọta gị Samsung ngwaọrụ mkpanaaka na a na kọmputa.
Nzọụkwụ 3: Pịa na Back elu / Restor e taabụ. Ebe ị ga-ahụ ndepụta ihe na ị nwere ike ndabere gị Samsung ngwaọrụ mkpanaaka.
Nzọụkwụ 4: Iji ndabere SMS si gị Samsung ngwaọrụ mkpanaaka, pịa na checkbox n'akụkụ Ozi na pịa ndabere. Biko hụ oyiyi n'okpuru.
Nzọụkwụ 5: Chere ruo mgbe Kies okokụre ndabere Samsung ozi ederede. Ị nwere ike ịchọta nkwado ndabere na mpaghara ebe na ala nke ihuenyo. Mgbe nkwado ndabere na mpaghara bụ ihe ịga nke ọma n'okpuru ákwà ga-apụta:
Nzọụkwụ 6: Pịa na Ok. Nke ahụ bụ ihe niile ị na-eme iji na-ndabere gị SMS si Samsung ngwaọrụ mkpanaaka.
Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Otú ọ dị, ị ga-eche ihu eziokwu na e nwere ọtụtụ nchekwa na SD kaadị. Ọ bụ a bit ike nke na ị chọta niile foto nchekwa ma e wezụga DCIM. Ya mere, nkwado ndabere na mpaghara niile Samsung photos, i nwere ike ịjụ enyemaka si a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, dị ka Samsung Kies.
Mwepu: Ọ bụ ezie Samsung Kies dị irè software, i nwere ike na-eche ihu ihe isi ike na njikọ na SMS ndabere.
Part 3. akpaghị aka ndabere Samsung Ozi Samsung Akaụntụ
E wezụga, Samsung Kies, Samsung na-enye a ọrụ ka ị ndabere nile SMS na ọbụna MMS na gị Samsung ekwentị ka ígwé ojii na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 1. On gị Samsung ekwentị, mgbata Ntọala> Accounts na mmekọrịta.
Nzọụkwụ 2. Pịa Tinye Akaụntụ> Samsung akaụntụ> debanyere na email, paswọọdụ. Arụsi ọrụ ike na akaụntụ site ịlele ahụ njikọ gị email.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ, na-aga azụ gị Samsung ekwentị na enweta gị Samsung akaụntụ na enweta Ngwaọrụ ndabere.
Nzọụkwụ 4. Akọrọ ndabere nhọrọ na nne Mmetụta Ozi (SMS) na Ozi (MMS). I nwekwara ike nne Mmetụta dekọọ na Ntọala. Mgbe ahụ, OK.
Nzọụkwụ 5. Laghachi Ngwaọrụ ndabere na nne Mmetụta Auto ndabere ka Samsung ekwentị ndabere SMS na SMS-akpaghị aka. Ma ọ bụ, ị nwere ike enweta Back ugbu a nkwado ndabere na mpaghara Samsung SMS na SMS aka.
Cheta na: Iji jiri Samsung Auto ndabere, i kwesịrị gbanye WiFi netwọk na gị Samsung ekwentị.
Part 4. Top 5 Android égwu Ime Samsung Ozi ndabere
Ụzọ ọzọ nke akwado gị photos na-eji ígwé ojii ọrụ nke na a na-akwado fọrọ nke nta niile ọhụrụ ngwaọrụ nke Samsung. Iji mee ka ya, ị mkpa aha na ihe ọ bụla na-eweta ọrụ nke na-enye ojii nchekwa na kwa nwere ezi data atụmatụ na mkpanaka gị na. Ụfọdụ ma ama ígwé ojii na-enye ọrụ are- Google Drive, Dropbox, Myspace, ọbụna Samsung onwe ya na-enye ojii nchekwa maka ọrụ nwere a Samsung akaụntụ.
Akwado Android OS
SMS ndabere & Weghachi 4.6 Free 1.6M Android 1.5 na elu Ritesh Sahu
SMS ndabere + 4.5 Free 1,010k Android 2.0 na elu Jan Berkel
Super ndabere: SMS & Ndi ana-akpo 4.4 Free Dịgasị na ngwaọrụ Android 2.0.1 na elu Mobile Echiche Studio
SMS ndabere & Weghachi (Kitkat) 4.3 Free Dịgasị na ngwaọrụ Dịgasị na ngwaọrụ INFOLIFE LLC
SMS ndabere 4.1 Free 1.4M Ma gụọ 2.3 TACOTY CN
1. SMS ndabere & Weghachi
Ọ bụ nnọọ dị mfe na ngwa na-bụ ike nke na-ewere nkwado ndabere na mpaghara nwekwara ike weghachi ekwentị SMS. Site ndabara, nkwado ndabere na mpaghara na-kere nọ n'ógbè gị na ekwentị. Ọ nwekwara ike ahazi bulite ka Google Drive, Dropbox ma ọ bụ ndị ọzọ Email.
Ozi na-kwadoo na XML format nke nwekwara ike converted ọzọ format na ike ga-ele ya anya na a na kọmputa.
Capable nke na-eke a scheduler n'ihi na akpaka ndabere.
Capable nke weghachi.
Ele ozi niile ma ọ bụ họrọ mkparịta ụka.
Hichapụ niile ozi na ekwentị
Ndabere faịlụ nwekwara ike emailed.
Mkpa ịgbanwe ntọala nkwado ndabere na mpaghara otu mkparịta ụka.
Download SMS ndabere & Weghachi si Google Play Store >>
Otu android ngwa nkwado ndabere na mpaghara SMS, MMS na oku log Ndenye-akpaghị aka.
Mepụta ndabere site na iji a iche iche labeelu na Gmail ma ọ bụ Google Kalinda.
Capable nke iweghachi SMS na oku na-aga log Ndenye.
Adịghị akwado MMS ndabere.
Nchekwa onwe ndabere adịghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na arụnyere na mpụga SD kaadị.
3. Super ndabere: SMS & Ndi ana-akpo
Ọ bụ nnọọ mfe na mfe android ngwa nkwado ndabere na mpaghara SMS na ihe ndị ọzọ na SD kaadị ma ọ bụ Gmail.
Tinyere SMS, Ọ nwekwara ike ndabere ngwa, kọntaktị, oku na-aga log, ibe edokọbara na kalenda.
Weghachi SMS, kọntaktị, oku na-aga log, ibe edokọbara na kalenda.
Hichapụ ndabere data na SD kaadị
Ndabere nwere ike ndokwa.
Enweghị ka mmekọrịta na Google mbanye.
Download Super ndabere: SMS & Ndi ana-akpo si Google Play Store >>
4. SMS ndabere & Weghachi (Kitkat)
Ọ bụ a kemfe android ngwa n'ihi na SMS nkwado ndabere na mpaghara weghachite.
Nwekwara ike ihichapụ SMS.
Ike nke na-asọkọta ọnụ otutu. mkparịta ụka nke otu ndị enwe dị iche iche nọmba ekwentị.
Abata ozi na Motorola Droid X / 2 ekwentị wee ghara kwadoo.
Download SMS ndabere & Weghachi (Kitkat) si Google Play Echekwala >>
5. SMS ndabere
Ọ bụ a free android na ngwa na-bụ ike nke na nkwado ndabere na mpaghara SMS ka SD kaadị ma ọ bụ na-a onwe E-mail.
Capable nke ma nkwado ndabere na mpaghara weghachite.
Nwere ike ihichapụ ndabere SMS na SD kaadị.
Ndabere ozi nwere ike-enyocha ọbụna ma ọ bụrụ na ozi anọwo na-ehichapụ si SD kaadị.
Iweghachi kwadoo SMS on Android version 4.4.2 adịghị ọrụ mgbe ụfọdụ.
Download SMS ndabere si Google Play Store >>
A Full Guid on Olee otú Jiri Kies
Wụnye, Uninstall, Update Kies on Mac
Copy Ndi ana-akpo si gam akporo ka Samsung
Ịgbanwee faịlụ site Samsung ka iPhone
Copy ọdịnaya site Nokia ka Samsung
iPhone VS Samsung ekwentị
Ịgbanwee iOS ka Samsung ekwentị
Nyefee Photos / Video si iPad ka Samsung
Android Update Manager:-esi ka mma arụmọrụ nke gị akporo ekwentị
> Resource> Samsung> 3 Ụzọ Mee Samsung SMS ndabere Mfe